कसरी जीमेल ब्याकअप गर्ने ग्याजेट समाचार
कसरी जीमेल ब्याकअप गर्ने
रुबेन गेलार्डो | | ट्यूटोरियलहरू
जीमेल सब भन्दा लोकप्रिय ईमेल सेवा हो पछिल्लो केहि वर्ष को। यो हाम्रो जीवनमा आएको हुनाले, यसले याहूको रूपमा विकल्पहरूलाई हटायो! वा आउटलुक। यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले सबै आगमन ईमेलहरू बचत गर्नुहुन्छ, के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि यदि हाम्रो खाता गल्तीले मेटाइयो भने के हुन्छ? यो उत्तम हो सक्रिय र समय समयमा तपाईंको जीमेलको ब्याक अप गर्न।
गुगलले सँधै हामीलाई भन्दछ कि उनीहरूका सेवाहरू धेरै सुरक्षित छन्, तर सत्य यो हो कि त्यहाँ के भन्ने भन्ने सवाल नै हुन्छ यदि ... त्यसैले, त्यस्तो उपायहरू लिनु उत्तम हुन्छ जुन हामीलाई लामो समयसम्म लिने छैन र कहिले पनि हुने छैन। हाम्रो ईमेलहरूको एक ब्याकअप। र केवल हामीले प्राप्त टेक्स्टबाट मात्र, तर जोडिएका फाइलहरूबाट पनि। यदि यो तपाईंको केस हो भने, तपाईंको जीमेल खातामा आधा जीवन हुन्छ, यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
हामीले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा तलको ठेगाना मार्फत हाम्रो गुगल खाता प्रविष्ट गर्नुहोस्।
अर्को हामी बक्सको श्रृंखला देख्नेछौं जुन हामीलाई एक कार्य वा अर्को गर्न अनुमति दिनेछ। हामीले बाकस खोज्नु पर्छ जुन "व्यक्तिगत जानकारी र गोपनीयता" लाई दर्साउँदछ। त्यहाँ सही छनौट गर्न हामीसँग विभिन्न विकल्पहरू छन् र जुन हाम्रो रुचि हो त्यो एक हो "तपाइँको सामग्री नियन्त्रण गर्नुहोस्"। यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
हामी अर्को विन्डोमा जान्छौं। देखापर्ने पहिलो विकल्प यो हो जुन हामीले "तपाईंको सामग्री डाउनलोड वा हस्तान्तरण गर्न" सक्दछौं। र उही वैकल्पिक को विकल्प को संकेत गर्दछ File फाईल सिर्जना गर्नुहोस् »। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी फेरि नयाँ विन्डोमा हाम फाल्छौं।
यसमा सबै गुगल सेवाहरू देखा पर्दछन्, तर जस्तो कि हामी केवल जिमेलमा रुचि राख्छौं This यस अवस्थामा मेल —, तपाईंले माथिको बटन थिच्नु पर्छ any कुनै छनौट नगर्नुहोस् »। यो "मेल" विकल्प खोजी र मार्क गर्ने समय हो। यस पछि, अन्तमा स्क्रोल गर्नुहोस् र «अर्को press थिच्नुहोस्।
तपाईंले गर्नुपर्ने अन्तिम कुरा भनेको हो तपाईंले डाउनलोड गर्न लाग्नु भएको फाइलहरू अनुकूलन गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, गुगल उपकरणले तपाईंलाई डाउनलोड गर्न फाइलको प्रकार छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं .ZIP र .TGZ का बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै, यसले तपाईंलाई अधिकतम फाइल वजन चयन गर्न पनि अनुमति दिन्छ। यो १, २,,, १० र GB० जीबी हुन सक्छ। तयार छ, तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको जगेडा सुरक्षित छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी जीमेल ब्याकअप गर्ने
फोर्टनाइट बैटल रोयाल मोबाइल फोनमा आउँदैछ
माइक्रोसफ्टले फेरि विन्डोज १० नि: शुल्क सक्रिय पार्न अनुमति दिन्छ